शनिदोषको प्रभाव हटाउन आज शनिबार गर्नुहोस् यी ३ काम ! – Naya Kura Daily
शनिदोषको प्रभाव हटाउन आज शनिबार गर्नुहोस् यी ३ काम !
September 5, 2020 95
जुन व्यक्तिमा शनि दोष*को प्रभाव अर्थात साढेसात द*शा हुने गर्दछ, ती व्यक्तिले शनिबार केही उपाय अप्नाउँदा श*नि*देव प्रसन्न हुने विश्वास छ।
ती उपाय अप्ना*उदा शनी देवको प्रभाव तथा जीवनमा आइपरेका सम*स्या ह*टेर जाने विश्वास गरिन्छ।
ज्योतिषाचार्य प्र*फुल्ल भट्टका अनुसार शनिबार राति केही उपाय अप्नाउदा हरेक किसिमका स*मस्या*बाट छुटकारा पाउन सकिने बताएका छन्। उनले यसो गर्दा श*नि*देवको कृपा समेत मिल्ने बताएका छन्। जुन व्यक्तिमा साढेसातको दशा तथा शनि दो*षको प्रभाव छ ती व्यक्तिले यी काम गर्नु आवश्यक छ।
यी उपाय अप्नाउनु*होस्:१) शनिबार राति भिजाएको पिठोमा २ वटा वत्ति बनाउनुहोस् र घरको मुख्य द्वारमा बाल्नुहोस्। बत्तिमा सरसोको तेल राख्नुहोस्। साथै उक्त वत्तिका कालो तिल र कालो दालका केही दाना पनि राख्नुहोस्। यसो गर्दा शनि*दोषको कृपा मिल्ने विश्वास गरिन्छ।
३) शनिबार राति एक रोटी बनाएर त्यसमा तेल लगाउनुहोस्। त्यसमा केही मिठो खानेकुरा राखेर कालो कुकुरलाई खुवाउनुहोस्। यसो गर्न सम्भव न*भए कुनै चौपायलाई खुवाउनुहोस्। यसो गर्दा पनि शनि*देवको न*कारा*त्मक प्रभाव हट्ने विश्वास गरिन्छ।
Prevविदेशबाट फर्केका आफ्नै साथीको ज्या’न लिए लिम्बुले
Nextआलुको एउटा फोटोलाई १२ करोड रुपैयाँ
१०७ वटी श्रीमतीका पति बेल्लोको अर्को बिहे गर्ने चाहाना !